Sida website loo sameeyo ugu sahlan - iftineducation.com
iftineducation.com – Markii hore website markuu rabo qofka inuu sameeyo wuxuu soo mari jiray meelo badan, wuxuu adeegsan jiray Front page ama Dreamweaver wuxuu qori jiray code sida html ama php ama asp iwm. laakin hadda arrimaha sahal ayay noqdeen, waxaa soo baxay barjaamijyo badan oo sahal ka dhigay samayska webka,
WordPress Joomla Xoops Drupal maxay yihiin?
Qaabka cusub web loo dhiso waxaa la adgeesadaa hadda CMS waxa loo yaqaano kaas oo diyaarsan oo keliya aad ku shubayso hostinkaaga markaas aad ku xirayso database sida Mysql waxaana ugu caansan WordPress oo webyo badan ay ka samaysan yihiin webyada warar iyaga ayaa u badan, waxaa la dhahaa aad buu u sahlan yahay webka laga sameeyo WordPress .
sidoo kale systemka Joomla wuxuu ka mid yahay kuwa ugu xoogga badan siiba qofka rabo inuu sameeyo website weyn oo loo adeegsan karo arrimo ballaaran sida shirkadaha iyo warshadaha sidoo kale tvyada dhamaan. waxaa la mid ah Drupal aad buu uga ballaaran yahay labadan aan soo sheegnay, waxaa u badan shirkadaha tikidka iyo diyaaradaha , xagga amaanka waxaa ugu caansan Xoops aad buu u xoog badan yahay webyada raacsan Xoops .
Ma u baahan tahay inaad hesho web free ah?
Waxaa jira labo web oo free ah waxay kala yihiin WordPress.com iyo Blogger.com waxaad ka samayn kartaa web lacag la’aan ah oo wax wallba aad ku shubi karto, keliya waxaa raacaya magaca aad u bixiso webka magaca shirkadda, haddii aad rabto waad gadan kartaa domin name markaas waxaad adeegsanaysaa domainka khaaska kuu ah.
waxaad ka heli kartaa webkan freega ah webyo badan oo loo adeegsaday kuwa aan soo sheegnay
webkan waa free magaca sidaas buu u raacayaa, haddii aad web free leedahay oo wax fiican aad ku qorayso oo aadan soo xadaynin waxaa laga yaabaa inaad lacag ka hesho.
Lacag malaga heli karaa internetka?
jawaabta waa haa shirkado badan ayaa jira oo lacag lagaga heli karo dacaayadda aad bay u badan yihiin waxaa ugu caansan google marka aqoontaada korarso wax ayaad ku heli kartaa